त्यसपछि बिहे हुनबाट जाेगिएँ
नवराज कुँवर काठमाडाैं, ५ चैत
मेरो एसएलसी अनुभव सम्झनलायक छ । पहिलो दिन, अंग्रेजीको परीक्षा थियो । विद्यालय जीवनमा पहिलोपटक दिन गइरहेको विशिष्ट परीक्षाको सुरुमा उत्तरपुस्तिका समात्दै अत्तालिएँ । हात काँप्यो । धड्कनले बेग मार्‍यो ।
‘एसएलसी पास गरिस् भने बाइक किन्दिन्छु, फेल भइस् भने बिहे गर्दिन्छु,’ पिताजीको आश्वासन र चेतावनी एकसाथ सम्झिएँ । मम्मीको पनि त भनाइ सम्झिनै पर्‍यो नि !, ‘एउटा छोरा होस्, इज्जत राखेस्, हाम्रो नाक नकाटेस् ।’
केही शिक्षक दाबी गरिरहेका थिए, यो बिल्टुवाले एसएलसी पास मरे पनि गर्दैन । ‘दिमाग तीक्ष्ण छ तर के गर्नु, कहिल्यै पढेको देख्दिनँ, खै शंकै लाग्छ’, परीक्षाको अघिल्लो दिन छिमेकीसमेत रहेका मेरा एक शिक्षकले भनेका थिए । ‘तर एक पटक भनेको र पढेको कुराचाहिँ बिर्सँदैन, अझै पनि समय छ, मन लगाएर पढ्यो भने राम्रो अंक ल्याएर पास गर्न सक्छ’, मेरा पिताजीसँग तिनै शिक्षकले यसो भनेको कुराचाहिँ किन लुकाऊँ ?
यी कुरा सुनेपछि पिताजीले मतिर हेरेर मुन्टो हल्लाए । मैले त्यसमा ठूलो धम्की देखेको थिएँ ।
अ हो ! एसएलसी पास त जसरी पनि गर्नैपर्छ !
मेरो दायाँतिर बसेका मित्र सुरेश पनि डराएका देखिन्थे । उनको गाला र कान रगत नै चुहिएलाजस्तो देखिने गरी रातो भएको थियो । अरू पनि डराएकै थिए ।
उत्तरपुस्तिकामा नाम ‘फिलअप’ गरेको केही समयपछि प्रश्नपत्र बाँडियो । प्रश्नपत्र पढ्न थालेँ । हिजो रातिसम्म खानै बिर्सिएर पढेको काम लागेछ ।
अधिकांश प्रश्न सल्भ गर्न सक्ने खालका थिए । मलाई उत्तर थाहा नभएका प्रश्न भएको भए त्यति गाह्रो पर्ने थिएन होला तर सजिलो लागेका प्रश्नहरूले त झन् अप्ठ्यारो पारे ।
उत्तर लेख्न सुरु गरेको छैन, म अंक जोड्न थालेँ । सुरूमा १०/१२ अंकवाला प्रश्न सल्भ गर्ने कि ५ अंकवाला ? दोधारमा परेँ ।
यो–यो प्रश्न चुट्कीको भरमा सल्भ गर्न सक्छु, .. यति नम्बर त पक्का । म आँकलन गर्न थालेँ । यसो नजर घुमाएँ, अरू त धमाधम उत्तर लेखिरहेका थिए ।
आत्तिएर लेख्न सुरु गरेँ । प्रश्न सजिलो लागेर होला, कतिखेर १ नम्बरको प्रश्न सक्नु र २ नम्बरको लेख्न सुरु गर्नु, कतिखेर २ नम्बरको सक्नु र ३ मा प्रवेश गर्नु भन्ने हतारले अगाडिका प्रश्नका ठेट उत्तरहरू चिप्लेको मेसै पाइएन । अर्को प्रश्न र उत्तरबारे सोचेर लेख्दा उत्तर बहकिने रहेछ ।
कान राता–राता पार्दै लेखिरहेका साथी सुरेश असिनपसिन भइसकेका थिए । अगाडि–पछाडि बसेका केटीहरू आफूले जानेका प्रश्नको उत्तर सल्भ गरिसकेपछि मुखामुख गरिरहेका थिए । कोहीचाहिँ चिटिङ गर्न ब्यस्त देखिन्थे ।
म लेखिरहेको थिएँ । १२ अंक पाइने प्रश्नमा प्रवेश गरेँ । यो प्रश्नको उत्तर त मैले बिहान मात्र पढेको थिएँ । यसो सोचेँ– मैले पढेको सम्झेर लेख्दा नम्बर कम पाइएला, गाइडको सार्न भ्याएँ भने त १२ अंक फ्याट्टै ।
मैले चिट गर्न भनेर गाइड पनि लगेको थिएँ । कम्मरमा च्यापेर राखेको गाइडको सहारा लिने निर्णयमा पुगेँ ।
बढी अंक ल्याउने ‘भूत’ मभित्र सल्बलाउन थालेको थियो । थाहा थिएन, त्यो भूतले कुन अवस्थामा पुर्‍याएर छाड्छ । त्यसअघि मैले कुनै पनि परीक्षामा चिटिङ गरेको थिइनँ । वास्तवमा मलाई परीक्षामा चिटिङ गर्नै आउँदैन थियो ।
प्रश्नपत्र हात पर्दा काँपेर मत्थर भएको शरीर फेरि काँप्न थाल्यो । कम्मरमा च्यापेर राखेको गाइड कसरी निकाल्ने, कसरी सार्ने ? सोच्दै मन झस्किरहेको थियो । पछाडिका केटीहरू कति साह्रो आँटी ? घोप्टो परेर सारेका सारै छन् । डर पनि नलागेको ।
९/१० कक्षामा चिटिङ गरेको गुरुले देखे भने बेइज्जत मात्र गर्थे र ? फेल नै गरिदिन्थे । घरमा बाउ कडा । फेल भन्ने शब्द सुन्दै बाउलाई ‘एलर्जी’ हुने ।
त्यसैले मैले कहिल्यै चिट गर्ने हिम्मत गरिनँ । सोही कारणले चिटिङ गर्न जानिएन ।
यो त एसएलसी । मनमा यस्ता कुरा खेलिरहँदा मेरो शरीर निकै तातेको थियो । तर, यसपटक मलाई कुनै हालतमा बढी नम्बर ल्याउनु छ । बाइक नपाए पनि बिहे हुनबाट चाहिँ जोगिनु छ ।
गार्ड कक्षाबाहिर गएको मौका पारेर कम्मरमा च्यापेर राखेको अंग्रेजी गाइड निकालेँ र अगाडिको डेस्कमुनि आफ्नो घुँडाले च्यापेँ । अघिसम्म त मन झस्किरहेको मात्र थियो अब हात पनि काँप्न थाल्यो । २ नम्बर कोठाको दोस्रो बेञ्चमा बसेको थिएँ । गाइड निकालेर घुँडाले च्यापेको भए पनि उत्तर सार्न सकिरहेको थिइनँ । अब ध्यान प्रश्नको उत्तरतिर होइन, गाइड लुकाउने र मौका पारेर हेर्नेतिर मोड्नुपर्ने बाध्यता सुरु भयो ।
जब गाइड निकाल्न खोज्छु, उत्तर कहाँ होला ? कसरी पत्ता लगाउने ? चोर्दाचोर्दै देखे भने के होला ? भन्ने प्रश्नले हच्काइरहेको थियो ।
परीक्षा हलबाट गार्ड फेरि बाहिर गए । हतार–हतार गाइड निकालेर पल्टाउन थालेँ । तर उत्तर कहाँ छ, थाहा थिएन । उत्तर खोज्दै थिएँ । अचानक सुपरिन्टेन्डेन्ट उत्तरपुस्तिका प्रमाणितका लागि कक्षा कोठामा प्रवेश गरे ।
हत्तपत्त गाइडलाई पहिलेकै जसरी घुँडाले च्याप्न भ्याएँ । म दोस्रो बेञ्चमा रहेकाले अगाडिका साथीहरूको कापीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सुपरिन्टेन्डेन्ट म बसेको बेञ्चमा आए । म निकै डराएको थिएँ ।
मेरो छेउमा आएर सुपरिन्टेन्डेन्टले हस्ताक्षर गर्दागर्दै काँपिरहेको घुँडाले गाइड थाम्न सकेन र सुपरिन्टेन्डेन्टकै अगाडि खस्यो, खुत्रुक्क ।
सर्टको गोजीबाट चश्मा निकालेर लगाउँदै सुपरिन्टेन्डेन्टले आफ्नो खुट्टातिर हेरे ।
गाइड देखेपछि मतिर हेरेर जंगिए, ‘के हो यो ?’
‘तपाईं सुपरिन्टेन्डेन्ट भएर पनि गाइड चिन्नु हुन्न ?’ यही, यही प्रश्न गर्न मन लागेको थियो तर गरिनँ ।
चुप लागेँ । त्यहाँ बोलेर जितिन्न भन्ने मलाई थाहा थियो । उनले गाइड टिपेर अगाडि फालिदिए । ‘फेरि यस्तो देखेँ भने परीक्षा हलबाटै निकालिदिन्छु’, यति भनेर उनले चश्मा खोले र अघिकै गोजीमा राखे ।
एकातिर गर्मी, अर्कातिर डरका कारण मेरो शरीर पसिनाले भिजेको थियो । भो, अब चिटिङ गर्ने युक्ति दिमागबाटै निकाल्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ । म मौलिक उत्तर लेख्न थालेँ । तर, लुकाछुपी गर्दागर्दै मेरो धेरै समय बर्बाद भइसकेको थियो ।
पास त भइयो तर अंग्रेजीमा मेरो सोचेजस्तो अंक आएन । पछि पछुताएँ– जानेको जति उत्तर सरासरी लेखेको हुन्थेँ भने मैले हिसाब गरेको जति नम्बर पक्का थियो ।
एसएलसीको पहिलो दिन प्रश्नभन्दा आफ्नै कारणले बढी सकसपूर्ण बन्न पुग्यो । यसबाट पाठ सिकेर मैले अन्य दिन त्यस्तो खालको भुल गरिनँ । त्यसैले समग्रमा राम्रै नम्बरसहित एसएलसी पास गरेँ र बिहे हुनबाट जोगिएँ ।
परीक्षा दिन छिर्नुअघि सबै खालका तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने रहेछ । निद्रा नै बिगारेर राति अबेरसम्म पढ्नाले पनि भोलिपल्ट परीक्षामा नकारात्मक असर पर्दोरहेछ ।
म त निकै कम समय पढ्थेँ । तर, जति पढ्थेँ, ती कुरा सम्झन सक्थेँ । मलाई लाग्छ, एकाग्र भएर कम समय पढ्दा लामो समयसम्म सम्झन सकिन्छ ।
प्रश्नपत्र हात परेपछि सुरूमा नआत्तिईकन सबै प्रश्न पढ्नुपर्छ ।
प्रश्नपत्र पढिसकेपछि म निकै राम्रो अंक ल्याएर पास हुन्छु भन्ने कुरा कल्पना गरी त्यसलाई अठोटमा बदल्ने र त्यहीअनुसार नहडबडाई प्रश्नका उत्तर लेख्ने गर्दा राम्रो हुनेरहेछ ।
सकेसम्म बढी अंक पाइने प्रश्नलाई सुरुमै सल्भ गर्दा राम्रो हुन्छ ।
परीक्षाका क्रममा साथीको कापी मागेर ढुक्कसँग लेख्नेहरूले सजाय पाएका कुरा पनि देखियो । आत्तिएर चिटिङ गर्दा एउटा प्रश्नको अर्कै उत्तर सारेको पनि हेरियो ।
कहिलेकाहीँ उत्तर लेख्दै जाँदा केही कन्फ्युजन देखा पर्न सक्छ । यस्तो बेला छेउको साथीलाई कोट्याउनु, सोध्नु वा बाधा पुर्‍याउन हुँदैन । त्यसले साथीको एकाग्रता तोड्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा समय खेर नफाली अर्को प्रश्नतिर लाग्नुपर्छ । साथीले लेखिसकेपछि यस्ता कुरा सोध्ने गर्नुपर्छ । चिटिङ गर्छु भन्ने दिमागमै राख्न हुँदैन ।
आज केही उत्तर चिटिङ गरेर लेख्छु भन्नेतिर मन बरालियो भने त्यसले अकल्पनीय असर पार्न सक्छ । त्यसले जानेका कुरालाई पनि भुलाउँछ ।
यी सबै अनुभव २०६४ सालमा सञ्चालित एसएलसीको हो । जति राम्रो गरौँला भन्ने थियो, त्यो गर्न नसके पनि झण्डै २ सय जनाको हाम्रो ब्याचबाट २६ जना उत्तीर्ण भएका थियौँ । म परेको २ नम्बर कक्षाबाट जम्मा ४ जना पास भएका थियौँ । मैले १५ वर्षको उमेरमा एसएलसी दिएको थिएँ ।
सामुदायिक विद्यालयका मजस्ता विद्यार्थीलाई यो निकै खुुसीको कुरा थियो ।
अहिले एसएलसीको परिवर्तित रूप एसईई हो । नाम जे भए पनि परीक्षा विधि, प्रश्नपत्र ढाँचा र उत्तर लेख्ने तरिका उही हो । एसईई दिने सम्पूर्ण भाइबहिनीले उच्च अंकका साथ एसईई पास गर्ने गरी प्रश्नहरू सल्भ गर्नू, मेरो शुभकामना छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६, ०१:२५:००